လန်ဒန်တိုက်ခိုက်ခံရမှု နောက်ပိုင်းအခြေအနေ သတင်းဓါတ်ပုံများ
၀၅ ဇွန်၊ ၂၀၁၇
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့တော်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က လူ ၇ ဦး သေဆုံးပြီး ၅၀နီးပါး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရတဲ့ အထိ တိုက်ခိုက်ခဲ့သူ ၃ ဦးဟာ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရဲက သိရှိထားပြီလို့ ၀န်ကြီးချုပ် Theresa May က ဒီကနေ့ ပြောပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ အတွင်း သင့်တော်တဲ့ အချိန်မှာ တိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့ နာမည်တွေကို ထုတ်ပြောမှာဖြစ်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီး လူ ၁၁ ဦးကို ရဲက ဖမ်းထားတယ်လို့ ၀န်ကြီးချုပ် May က ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာဘဲ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသူတွေ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်သလဲ ဆိုတာသိရဖို့ ရဲက ဆောင်ရွက်နေပြီး အခုအချိန်ထိတော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာဘဲ သိထားရသေးတယ်လို့ ဗြိတိန် ခေါင်းဆောင်က ပြောပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုက လန်ဒန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သလို လွတ်လပ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို တိုက်ခိုက်တာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ထပ်လောင်း ပြောပါတယ်။
၁ Armed police officers stand near the site where attackers crashed their van after running over pedestrians on London Bridge, next to Borough Market in central London, June 5, 2017.
၂ Mayor of London Sadiq Khan, right, speaks duringamedia conference at London Bridge, June 5, 2017. Police arrested several people and are widening their investigation afteraseries of attacks in the heart of London on Saturday.
၃ Forensic police investigate around the Borough Market and London Bridge area of London, June 5, 2017.
၄ Pedestrians walk by newly installed barriers on Westminster Bridge in London, June 5, 2017.